အလုပ်သမားများ' ဒုက္ခသည်များအတွက်အခွင့်အရေးများသတင်းအချက်အလက်များ & ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
အလုပ်တစ်ခုသင်ရှာပြီးတာနဲ့, သငျသညျအလုပျမှာသငျသညျကိုကာကွယ်ရန်အချို့သောအခွင့်အရေးရှိသည်. In the USA, everyone must be treated fairly. Your boss must follow laws or he/she will be fined or punished by the law. Read to learn more about workers’ rights in the USA.
The government in the USA has workers’ သငျသညျစေရမယ်ငွေဘယ်လောက်ဆိုအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေများ. သငျသညျအလုပ်လုပ်နိုင်နာရီမည်မျှအကြောင်းကိုဥပဒေများနှင့်ဘယ်လိုသင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်သငျသညျဆကျဆံလည်းရှိပါတယ်. သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်သင်သည်အလုပ်လုပ်ဘို့အလုံခြုံပြီးကျန်းကျန်းမာမာရာအရပျပေးရမညျ. If he or she does not, they can be punished by law.
ဖက်ဒရယ်အစိုးရသည်တစ်နိုင်ငံလုံးအဘို့ဥပဒေများစေသည်. ပြည်နယ်အစိုးရများက၎င်းတို့၏ပြည်နယ်များတွင်ဥပဒေများအောင်. ဖက်ဒရယ်အစိုးရသည်ပြည်နယ်အစုတခုနိမ့်ဆုံးလုပ်ခများ. နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခအလုပ်ရှင်များဟာသူတို့ရဲ့န်ထမ်းပေးဆောင်ရမယ်လို့နိမ့်ဆုံးပမာဏ. ဖက်ဒရယ်နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခဖြစ်ပါသည် $7.25 တစ်နာရီလျှင်. ဒါဟာဘယ်နေရာမှာမဆိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အလုပ်ရှင်သည်အနည်းဆုံးသင်ပေးဆောင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ် $7.25 တစ်နာရီလျှင်.
တခါတရံပြည်နယ်နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခဖက်ဒရယ်နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခထက် ပို. မြင့်မားသည်. ဥပမာ, ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၏နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခရှိပါတယ် $8.00 တစ်နာရီလျှင်. အရီဇိုးနား၏နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခရှိပါတယ် $7.65 တစ်နာရီလျှင်. ဤအပြည်နယ်များရှိ, အလုပ်ရှင်များအလုပ်သမားပိုမိုမြင့်မားသောငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ရပါမည်.
သိကောင်းစရာများသင်၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှဖောက်သည်များအနေဖြင့်ပိုက်ဆံများမှာ. သိကောင်းစရာများဘောဇဉ်သို့မဟုတ်အခွန်ပမာဏမပါဝင်ပါ. သင်တစ်ဦးစားသောက်ဆိုင်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်သင်ထက်ပို၏အကြံပေးချက်များခံယူတဲ့အလုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ခဲ့လျှင် $30 တစ်လ, ထို့နောက်သင်တစ်ဦးအဖြစ်အသုံးချနိုင်ပါသည် “ဝန်ထမ်းတင်ရန်။” တင်ရန်န်ထမ်းအနည်းဆုံးပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည် $2.13 တစ်နာရီပေါင်းဟာသူတို့ရဲ့အကြံပေးချက်များ. သိကောင်းစရာများထက်ပိုရှိရမည် $5.12 တစ်နာရီကိုသင်ဆဲ၏ဖက်ဒရယ်နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခဝင်ငွေဖြစ်ကြောင်းသို့မှသာ $7.25 ($2.13 + $5.12 = $7.25). There are some restaurants that include the tip in the bill. When you are hired, your boss will tell you the rules about tipping. You can read more about the rules for tipped employees ဒီမှာ.
အချို့နိုင်ငံများရှိ, အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကွဲပြားခြားနားပေးဆောင်နေကြ. သို့သော်, အမေရိကန် ဥပဒေများ ဒီခွင့်မပြုပါဘူး. သင်တစ်ဦး Co-အလုပ်သမားကဲ့သို့တူညီသောအလုပ်လုပ်နေကြပါလျှင်, သငျသညျတူညီသောအခကြေးငွေရမည်ဖြစ်သည်. သင်တို့သည်လည်းအတူတူပင်အချိန်ပိုလစာရသင့်တယ်, အားလပ်ရက်နာရီ, နှင့်ဆုကြေးငွေ. Employees should only get more if they are in different positions or do more in the same position. They can also be paid more if they have better skills or more experience in the field they work in.
အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင်ဒဏ်ရာကိုသင်ဖွစျနိုငျ. သငျသညျကိုထိခိုက်စေရခဲ့လျှင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်, ချက်ချင်းပဲသင့်ရဲ့မန်နေဂျာကိုပြောပြရန်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ဒဏ်ရာကုသရန်ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ်. အလုပ်သမားများ’ လျော်ကြေးဥပဒေများကုသမှုရှိသည်ဖို့သင့်အခွင့်အရေးများကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်. သင့်ရဲ့ကုသမှုနှင့်လုပ်ခ၏အချို့သင့်ကုမ္ပဏီအားဖြင့်များအတွက်ပေးဆောင်နိုင်.
မမျှတရပ်စဲသင်တစ်ဦးတရားမဝင်အကြောင်းပြချက်ပစ်ခတ်တယ်ဆိုလိုသည်. သင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းထင်နေလျှင်, အလုပ်ဒဏ်ရာ, သို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်, သင်တစ်ဦးရှေ့နေမှပြောနေတာကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်. workers'rights နှင့်အတူလူကိုကူညီတဲ့သူရှေ့နေများကရှိပါတယ်.
သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်သင့်လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်အန္တရာယ်မရှိသေချာအောင်ရမယ်. အန္တရာယ်များကိုသင်ထိခိုက်စေနိုင်သောအရာဖြစ်ကြ၏, ထိုကဲ့သို့သောဓာတုပစ္စည်းသို့မဟုတ်မလုံခြုံရေးကိရိယာများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအဖြစ်. တခါတလေ, သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အလုံခြုံရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်. ဥပမာ, တစ်ဦးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားအရပ်ရှည်ရှည်အဆောက်အဦပေါ်တက်ရန်ရှိသည်စေခြင်းငှါ,. ပညတ်တရားအောက်၌, အလုပ်ရှင်များအလုပ်ခွင်မှာအလားအလာအန္တရာယ်များအကြောင်းကိုသင်ပြောပြရန်ရှိသည်. သူတို့ကအစသင်နားလည်သောဘာသာစကား၌သငျလေ့ကငျြ့ပေးရန်ရှိသည်. သငျသညျခံစားရသို့မဟုတ်ကြည့်ရှုပါလျှင်အရာတစ်ခုခုကိုသင့်ရဲ့မန်နေဂျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မသိကြောင်းမလုံခြုံဖြစ်ပါသည်, သူတို့ကိုပြောပြ.